UNazism noPapa uBenedict XVI (uJoseph Ratzinger)
Kutheni ujoyina intsha yaseHitler?
Umbuzo wokubandakanyeka kukaJoseph Ratzinger neJamani eJamani kunye noLutsha lweHitler kubalulekile ekuqwalaseleni ubomi bomntu owaba uPapa uBenedict XVI. Nangona iholele abanye ukuba babuze umlingani wakhe, kodwa waphonononga uphando nge-Wiesenthal Centre, ekhupha naluphi na ummangalelwa wokungabinamkeli .
EJamani ngexesha loLutsha lwabaHlatshi
Ngexesha elininzi lamaNazi, uJoseph Ratzinger wayehlala nentsapho yakhe eTurunstein, eJamani, idolophu encinci kunye neKatolika phakathi kweMunich neSalzburg.
NgeMfazwe Yehlabathi I kwakukho inkampu yemfazwe ekhoyo apha apho, ngokumangalisayo, u- Adolf Hitler wasebenza phakathi kukaDisemba 1918 no-Matshi 1919. Idolophana ihlala kufuphi nommandla wase-Austria apho uHitler ayevela khona.
Ukumelana namaNazi kwakunobungozi kwaye kunzima, kodwa akunakwenzeka. U-Elizabeth Lohner, umhlali waseTraunstein umntakwabo othunyelwa kuDachau njengomntu onqaba ukuya empini ngenxa kanembeza, ucatshulwa esithi, "Kwakunokwenzeka ukuchasa, kwaye abo bantu babeka abanye umzekelo. AbaHlatshi babeselula kwaye benza ukhetho oluhlukile. "
Kwimitha engamakhulu ambalwa ukusuka kwindlu yabalandeli, intsapho yafihla uHans Braxenthaler, umkhosi wokhuseleka wendawo owazitshiza ngokwakhe kunokuba athathwe kwakhona. I-SS yayisoloko isesha amakhaya asekuhlaleni amalungu okumelana, ngoko ke abaLatshi babengenakungazi malunga nemigudu yokuxhathisa.
I-Traunstein yabona ngaphezu kwesabelo sayo sobundlobongela basekhaya.
Kwimbali yakhe kaJoseph Ratzinger, uJohn L. Allen, Jr. uthi ulwaphulo-mthetho lwama-Semitic, ukufuduka, ukuxoshwa, ukuxhatshazwa, kunye nokuchasana kwajika le dolophu yaba "yindawo yokukhosela abantu abangenathemba."
Unomdla ukuba enye yezofundo uJoseph Ratzinger , owaba nguPapa uBenedict XVI, ephuma kumava yamaKatolika aseJamani phantsi kwamaNazi kukuba amaKatolika kufuneka abe nokuthobela ngakumbi iinkokheli zabo zonqulo kunokuba bakhululeke ukuba bafumane izifundo zokuzimela ezizimeleyo.
I-Ratzinger ikholelwa ukuba ukunyaniseka okukhulu kwiimfundiso zamaKatolika, njengoko kuchazwe yiVatican, kuyimfuneko ukulwa nokunyuka njengoNazism.
Imvelaphi kaJoseph Ratzinger Ngexesha leNazi
Awukho umxhasi okanye naluphi na ilungu lentsapho yakhe engena kwi-NSDAP (iNational Party). Uyise ka Rattinger wayegxeka u rhu lumente, kwaye ngenxa yoko, intsapho yafuneka ifake kane emva kokuba ineminyaka elishumi ubudala.
Akukho nanye kule nto iphawulekayo, nangona kunjalo, kuba kwenzeka enye nakwezinye iintsapho zamaKatolika aseJamani. Nangona ezininzi iinkokeli zamaKatolika zaseJamani zikulungele ukusebenza namaNazi, amaninzi amaKatolika kunye nabafundisi bamaKatolika abazange banqabile ngokusemandleni abo, benqaba ukusebenzisana nolawulo lwezopolitiko abawuthatha njengoluphiko lwamaKatolika kwiimeko ezilungileyo kakhulu.
UJoseph Ratzinger wajoyina u-Hitler Ulutsha ngo-1941 xa, kunye bakhe nabalandeli bakhe, bekufuneka ibe yinyanzeliso kubo bonke abafana abangamaJamani. Izigidi zabantu baseJamani zisesimweni esifana nesoJoseph Ratzinger kunye nentsapho yakhe, ngoko kutheni uchitha ixesha elininzi kangaka ugxila kuye? Ngenxa yokuba akazange ahlale nje nguJoseph Ratzinger okanye nokuba ngumKhadikhali wamaKatolika - waba nguPapa uBenedict XVI. Akukho namnye amaJamani ajoyina i-Hitler Youth yayingumkhosi wemikhosi eJamani yaseNazi, ehlala kufuphi neenkampu zenkampu, kwaye wayebukele amaYuda ajikelezwe kwiinkampu zokufa.
Upapa kufuneka abe ngumlandeli kaPetros, inkokheli yeCawa yamaKristu, kunye nomqondiso wobunye kwiNgqobhoko yonke. Izenzo ezidlulileyo - okanye ukungaboni - into enjalo into ebaluleke kakhulu ukuba umntu uya kumphatha njengaluphi na uhlobo lolawulo lokuziphatha. Ukukhunjulwa kwamanqanaba ebuntwaneni bakhe eJamani baseNazi basebenza ukuba kubonakale ngathi zonke iingxaki, ubundlobongela kunye nenzondo zazikho ngaphandle kwendawo yakuhlala kuyo. Akukho ukuqonda ukuba ukumelana namaNazi kwakunjalo-okanye kwakufuneka - ngaphandle komnyango wakhe.
Ukhuselo lukaJoseph Ratzinger
UHitler Jugend : UJoseph Ratzinger uye wachaza ukuba ubulungu bakhe kwiNtsha yaseHitler kwakunyanzelekile - kwakungekho ukukhetha kwakhe ukujoyina kwaye ngokuqinisekileyo akazange ajoyine naluphi na ukukholelwa kwakhe ukuba amaNazi ayelungile. Nangona ube lilungu, wenqaba ukuya kuyo nayiphi na intlanganiso.
Ukuya kubakho kuyancitshisa iindleko zesikolo sakhe kwi-seminari, kodwa oku akuzange kumthinte.
Ukuchasana : Ngokutsho kukaJoseph Ratzinger, kwakungenakwenzeka "ukumelana namaNazi. Ukuba esemncinci, kwakungenakulungeleka ukuba enze into enxamnye namaNazi kunye neentlungu ezazizenzayo. Nangona kunjalo, intsapho yaseHatzinger yachasa amaNazi kwaye, ngenxa yoko, yaphoqeleka ukuba ihambe kane. Akunjengekuthi bazithobela ngokukhawuleza kwaye benyameko oko kwenzekayo, ezinye iindidi ezenzileyo.
Umkhosi : uJoseph Ratzinger wayelungu le-anti-aircraft unit ekhusela imboni ye-BMW eyayisetyenziselwa abasebenzi bekhoboka kwiinkampu zoxinzelelo zaseDachau ukwenza iinjoni zeenqwelo-moya, kodwa wabhalwa emkhosini kwaye akazange abe naluphi na ukhetho kulo mbandela. Enyanisweni, u-Ratzinger uthi akazange aphephe udumo kwaye akazange athathe inxaxheba kuyo nayiphi na impi. Kamva wathunyelwa kwiyunithi eHungary apho wamisa khona iingcambu zetanki waza wabukela njengoko amaYuda ayexelwe ukuthutha kwiinkampu zokufa. Ekugqibeleni, washiya waza waba yintolongo yemfazwe.
Ukugxeka uJoseph Ratzinger
UHitler Jugend : Amangalo kaJoseph Ratzinger malunga noLutsha lweHitler ayinyani. Ubulungu obunyanzelekileyo buchazwe kuqala ngo-1936 kwaye buqiniswa ngowe-1939, kungekhona ngo-1941 njengoko athethayo. I-Ratzinger ithi kwakhona "wayesencinane" ngeli xesha, kodwa wayeneminyaka eyi-14 ngo-1941 kwaye engaselula kakhulu: phakathi kweminyaka eyi-10 no-14, ubulungu kwiDeutsche Jungvolk (iqela labantwana abancinci) laliyimfuneko . Nangona kunjalo akukho nto ikhankanyiweyo ye-Rattinger.
Ukuba wayekwazi ukukhusela ubulungu obufunekayo kwiDeutsche Jungvolk, kutheni ngokuzenzekelayo wajoyina intsha yaseHitler ngo-1941?
Ukuxhathisa : Bobabini uJoseph Ratzinger kunye nomntakwabo, uGeorg, bathi "ukuchasana kwakungenakwenzeka" ngelo xesha kwaye, ngenxa yoko, akuyikuxhamla okanye ukuziphatha kakubi ukuba "bahamba." Oku akunjalo. Okokuqala, kuhlambalaza abaninzi ababeka ubomi babo engozini ukuze baxhathise umbuso wamaNazi, zombini kwiiseli ezihleliweyo kunye nomntu ngamnye. Okwesibini, kukho imizekelo emininzi yabanqabe inkonzo kwinkonzo yaseHitler ngezizathu ezahlukeneyo.
Nantoni na intsapho yaseRatzinger yenzayo kwaye nayiphi na uyise kaYoseph Ratzinger, kwakungekho ngokwaneleyo ukubanjwa okanye ukuthunyelwa kwinkampu yokuxininisa. Akwabonakali ukuba yanele ngokwaneleyo ukuba ivume ukuvalelwa kunye nokubuzwa ngabaGestapo.
Amagosa : Nangona inyaniso ukuba uMtshatsheli washiya umkhosi kunokuba aqhubeke elwa, akazange enze oko kude kube ngo-Ephreli 1945, xa ukuphela kwemfazwe kwakukufutshane.
Akukho sizathu sokuba sicinge ukuba uYoseph Ratzinger, owaba nguPapa uBenedict XVI, ngoku okanye owake wakha ngasese ngamaNazi. Akukho nto athe wathetha okanye yenzayo kude kukubonisa ukuba uvelwano oluncinane kunye naziphi na iingcamango zobuNazi okanye injongo. Naliphina ibango lokuba ungumNazi alinakwenzeka. Nangona kunjalo, akusilo ukuphela kwebali.
Nangona i-Ratzinger yayingeyena wamaNazi ngaphambili kwaye uBenedict XVI akayena wamaNazi ngoku, kunesizathu esingakumbi sokumelana nokuphatha kwakhe ixesha elidlulileyo.
Kubonakala ukuba wayengathembekanga kwabanye - mhlawumbi engathembekanga naye-malunga noko akwenzileyo noko akwenzileyo.
Akukwenyaniso nje ukuba ukuchasana kwakungenakwenzeka ngelo xesha. Kunzima, ewe; yingozi, ewe. Kodwa akunakwenzeka. UJohn Paul II wabamba iqhaza kwimidlalo yokulwa neNazi ePoland, kodwa akukho ubungqina bokuba uJoseph Ratzinger wenza oku.
Umlinganisi usenokuba wenza okungaphezu kwamanye amaninzi ukumelana naye, kodwa wenza okungaphantsi kwamanye. Kuyaqondakala ukuba akayi kuba nesibindi sokwenza okungakumbi kwaye, ngaba wayeyena mntu oqhelekileyo, oko bekuya kuba kukuphela kwebali. Kodwa yena akayena umntu ophakathi, ngaba yena? Wayengumpapa, umntu omele abe ngumlandeli kaPetros, intloko yeCawa yamaKristu, kunye nomqondiso wobunye kwiNgqobhoko yonke.
Akufanele ube nokuziphatha okugqibeleleyo ukubeka isimo esinjalo, kodwa akunangqiqo ukulindela umntu onjalo ukuba afikelele kwimimiselo yabo yokuziphatha, kwanokusilela kokuziphatha okwenzeka ebusheni xa singalindelanga ukuba idili enkulu. Kwakuyimpazamo eqondakalayo okanye ukungaphumeleli ukwenza okungakumbi ngokumelene namaNazi, kodwa ke, ukungaphumeleli ukuba engazange ahambisane nayo - kubonakala ngathi uthanda. Ngengqiqo, akaphendukanga; kodwa wayengabonwa njengabona baphambili kubaviwa bonke abapapa.
Ukholo olunamandla kunye nobuthathaka
Iziphakamiso ze-Axiological kwi-Morality and values
Ukuchazwa kweZakhiwo zoLuntu kunye neziHlabathi
I-GR ngokumelene ne-GMAT: Ukuthelekiswa kweNdlunkulu
Yintoni ekhuphukayo yokunyuka?
Iindaba eziNyaniso ze-UFOs kunye nabaPhambukeli.
Nceda, Musa 'ukucaphula'
Ukubamba iMangrove Snapper kwi-Florida Keys
Iifoto ze-Aviator u-Glenn Curtiss, i-June Bug, ne-Historic Seaplanes
I-Bleiben (Ukuhlala) Iingqungquthela zesiLwimi zesiJamani
I-Germanic Trivia: IiNdlu ze-Windsor kunye neHanover
I-Smashing Pumpkins '' uMellon Collie kunye nosizi olungapheliyo '
I-Architecture Awuyi Kuyibona kwiZero Zero
Iinkqubo zokuBhala zaseJapan